बि’प्लवको जनसभाका गोप्य राखिएका १० दृश्य !::देश र जनताप्रति समर्पित
बि’प्लवको जनसभाका गोप्य राखिएका १० दृश्य !
नेत्र बिक्रम चन्द ‘वि’प्लव’ नेतृत्वको नेकपाले गत मंसिर ८ मा पार्टी पुनर्गठन दिवसका भब्यरुपले मनायो । राजधानी काठमाडौको भृकुटीमण्डपमा आयोजित जनसभा देशै भरीका युवाहरु उपस्थितिले सानदार बनेको थियो ।
उक्त्त जनसभाको माहोलाले सामाजिक सन्जाल तथा मिडियाहरुमा नेकपाको बाक्लो उपस्तिथि रहन गयो । उक्त्त कार्यक्रममा देखिएका केहि हेर्न लायक दृश्य यस्ता रहेका थिए । जसलाइ पुर्णरुपमा सार्वजनिक गरिएको थिएन भन्ने बुझिएको थियो ।
पौडेल पत्नी: हात भाच्ने दात झार्ने र हतियार राखेर फोटो…..
प्रतिबन्धित विप्लवको पार्टीलाई सघाएको भन्दै दूधे बालकसहित आमा पक्राउ
विप्लवको बिज्ञप्ती : षड्यन्त्र चिर्दै विश्वास झाङ्गिएको छ बिज्ञापन बढाउन गलत नलेख्नु
एकीकृत जनक्रान्तीनेत्र विक्रम चन्द विप्लवविप्लव